WhatsApp for Mac waxay kuu ogolaanaysaa inaad hakiso oo aad dib u bilowdo duubista codka | waxaan ka imid mac
Isticmaalayaal badan (naftayda ayaa ku jira), cod la duubay waa ka sii daran waligii la hindisay. Uma baahnid in aan wakhtigayga ku lumiyo dhegeysiga fariinta codka ah ee dhowr daqiiqo ah halkaas oo wax isku mid ah lagu soo celceliyo, marar badan, marka la odhan karo fariin.
Si kastaba ha ahaatee, shaqadan waxaa si isa soo taraysa u isticmaala macaamiisha WhatsApp shirkadduna waxay ka shaqaynaysaa sidii ay uga dhigi lahayd mid aad loo isticmaalo. Sida laga soo xigtay guys ka WABetaInfo nooca 2.2201.2 ee WhatsApp Desktop ee Mac Waxaa ku jiri doona isla shaqeynta oo sidoo kale imaan doonta iOS.
Waxaan ka hadlayaa suurtogalnimada Jooji oo dib u bilaw duubista codka. Beta-gan cusub, halkii laga muujin lahaa badhan lagu joojinayo duubista, waxay tusinaysaa badhanka hakadka.
Habkaani waa ku haboon haddii inta lagu guda jiro duubista fariinta, waa inaan joojinaa inay si taxadar leh uga fikirto waxa aan rabno inaan dhahno, raadso ereyga saxda ah ...
Marka aan joojino fariinta, waxaan haysanaa ikhtiyaarka ah ciyaar si aan u aragno inaan jecelnahay, dib u bilaabayno duubista, dirno ama tirtirno oo dib u bilowno.
Laakiin ka baxsan shaqeynta, waxay noqon kartaa a xanuun run ah dhammaan isticmaalayaasha saaxiibadood ama qoyskoodu soo diraan fariimaha dhowr daqiiqo ah.
Marka laga hadlayo taariikhda la bilaabay shaqadan cusub, aan la garanayn hadda. Habkani hadda waxa uu ku jiraa beta nooca iOS sidoo kale. Ilaa nooca ugu dambeeya ee iOS ee leh shaqadan la sii daayo, ha filanin inaad ku aragto nooca macOS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » WhatsApp for Mac wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hakiso oo aad dib u bilowdo duubista codka